Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate - Dabeecadda ugu fiican ee loo yaqaan steroids
Waa maxay Primobolan (methenolone enanthate)? Methenolone Enanthate (303-42-4) iyo Methenolone Acetate (434-05-9) waxay ka kooban tahay waxyaabo la mid ah, shaqadooduna waxay ku dhowdahay midka kaliya ee methenolone Enanthate leeyahay ester ku lifaaqan si ay u caawiso hoos u dhigista sii daaya steroid jirka. Sidoo kale, Methenolone Enanthate ayaa loo maamulaa iyada oo loo maro cirbad halka Methenolone Acetate la sameeyo ...
Ma waxaad xiisaynaysaa in aad haysatid jirka dilaaga ah ee qof walboo daaliya? Inkastoo cunista saxda ah iyo aadida jimicsiga ma ahan mid ku filan, qaadashada steroid anabolic xaqiiqdii waa wax soo saar badan intii aad ka fikirtay. Maanta waxaan kuugu warramayaa Nandrolone Decanoate, wareegga Deca Durabolin, qiyaasta Nandrolone Decanoate, isticmaalka Nandrolone Decanoate, dib u eegista Nandrolone Decanoate iyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan daroogada weyn. ...
Equipoise waa steroid kale oo cajiib ah oo iibiya hoosta magaca Boldenone Undecylenate (13103-34-9). Boldenone Undecylenate wuxuu caan ku yahay jilayaasha jirka iyo ciyaartooyda iyada oo ay sabab u tahay awoodda ay u leedahay inay bixiso murqaha tayada iyo xoogga. Steroid waxaa sidoo kale laga heli karaa suuqyada iyadoo la isticmaalayo magacyo kala duwan sida Mitgan, Bolden, Equigan, Ganabol, iyo Ultragain iyo kuwo kale. Isku day inaad ku socoto ...